Fonosana lohalikaina Shina miaraka amin'ireo orinasa mpamokatra ranomandry | Huanyi
NY FIVORIANA NY DAHOLO MANDRITRA: Mikendry ny aloha sy ny lohalika amin'ny lohalika miaraka amin'ny famatrarana azo ovaina sy ny fitsaboana mafana na mangatsiaka, ny fikandrana amin'ny lohalika mangatsiaka dia mampihena ny fivontosana, ny fanaintainana ary ny fivontosana noho ny havizanana, ratra na fandidiana. Ny fehin-kibo malefaka koa dia manome fanamaivanana ahazoana aina ho an'ny sprains sy ny aretina, ACL, aretin-tratra, ratra amin'ny fanatanjahan-tena, fandidiana sy maro hafa.
THERAPY mafana na mangatsiaka: Ahitana fonosana gel azo esorina amin'ny fitsaboana mafana na mangatsiaka. Ny kitapo tsirairay dia miditra mora foana ao anaty paosy. Ny fonosana gel tsy misy poizina dia azo ampiasaina indray, tsy voaporitra ary tsy misy tara-tara.
NY FIVORIANA NY DAHOLO MANDRITRA:Mikendry ny aloha sy ny lohalika amin'ny lohalika miaraka amin'ny famatrarana azo ovaina sy ny fitsaboana mafana na mangatsiaka, ny fikandrana amin'ny lohalika mangatsiaka dia mampihena ny fivontosana, ny fanaintainana ary ny fivontosana noho ny havizanana, ratra na fandidiana. Ny fehin-kibo malefaka koa dia manome fanamaivanana ahazoana aina ho an'ny sprains sy ny aretina, ACL, aretin-tratra, ratra amin'ny fanatanjahan-tena, fandidiana sy maro hafa.
THERAPY mafana na mangatsiaka:Ahitana fonosana gel azo esorina amin'ny fitsaboana mafana na mangatsiaka. Ny kitapo tsirairay dia miditra mora foana ao anaty paosy. Ny fonosana gel tsy misy poizina dia azo ampiasaina indray, tsy voaporitra ary tsy misy tara-tara.
1.10 taona niainany OEM, ODM. Azontsika atao ny manamboatra ny endriny, ny tadiny, ny sary famantarana, ny fonosana sns, afaka manome anao soso-kevitra matihanina ary hamolavola vahaolana tsara indrindra ho an'ny vokatrao.
4. Ho an'ireo fonosana amin'ny lohalika misy fonosana ranomandry, kitrokely, hato-tanana, zanak'omby, andilana, tongotra, fonosana gilasy, ny orinasanay dia manana habe sy endrika samihafa ho an'ny safidinao, afaka mifanaraka amin'ny olona maro.
Fitaovana fananganana orinasa: SGS, FDA, CE, REACH, PROP65, BSCI
Previous: fonosana gel mafana sy mangatsiaka
Manaraka: Kitapo ranomandry ankizy
Kitapo gilasy tsara indrindra
Fonosana lohalika mangatsiaka
Fonosana lohalika mangatsiaka mafana
Kitapo gilasy ho an'ny lohalika
Ice Brace ho an'ny lohalika
Fonosana gilasy ho an'ny lohalika
Pack mangatsiaka mandohalika
Kitapo gel mandohalika
Fonosana lohalika amin'ny fonosana gilasy